Ogaden News Agency (ONA) – Bangiga Aduunka oo Itoobiya Udiiday Dayn Iyo Deeq Toona.
Bangiga Aduunka oo Itoobiya Udiiday Dayn Iyo Deeq Toona.
Warar naga soo gaadhaya magaalada Addis Ababa ee xarunta Gumaysiga Itoobiya ayaa sheegaya in taliska wayaanuhu uu waji gabax kala kulmay codsi uu ugudbistay bangiga aduunka, sida xogta aan kuhelayno taliska wayaanaha ayaa mudo kumashquul sanaa sidii uu hanti uga heli lahaa baanka aduunka si uu danihiisa ugu fushado.
Madaxda bangiga aduunka ayaa si cad taliska wayaanaha ugu sheegay in aan lasiin doonin wax dhaqaale ah dayn iyo deeq toona, wuxuuna bangigu taliska usheegay in aan wax hati ah lagu aamini karin, isla markaana maamul uusan kajirin wadanka gumaysiga Itoobiya.
Baanka aduunka ayaa soo qaatay cadaymo dhowr ah oo kusaabsan dhaqanka taliska wayaanaha, waxayna madaxda bangigu sheegeen in si khaldan loo isticmaalay lacago faro badan oo ay siiyeen xukuumada wayaanaha, sidoo kale madaxda bangiga ayaa sheegtay in xukuumada wayaanaha lagu leeyahay lacag aad ubadan oo mudo dheer lagu lahaa.
Dhaqaalaha wadanka Itoobiya ayaa lasheegayaa in uu bilihii lasoo dhaafay aad hoos ugu dhacay, waxaana lasheegayaa in ashcaartu ay wadanka Itoobiya gaadhay meeshii ugu saraysay abid.
Dhinaca kale lacagihii dibada uga imaanjiray xukuumada wayaanaha ayaa hoos udhacay 80% waxaana gabi ahaanba meesha kabaxay dalxiisayaashii iyo maalgashatadii, taas oo keentay in dharbaaxo wayn oo dhinaca dhaqaalaha ah ay soo gaadho taliska wayaanaha.
Sidoo kale musuqa ayaa wadanka Itoobiya gaadhay meel aan waxba laga qaban karin, waxayna saraakiisha taliska wayaanaha ugu saraysa bilaabeen in ay utartamaan hantida shacabka iyagoo dhaqaale abuur badan sameeyay.